Dowladda "oo qabsatay" Buulobarde - BBC Somali
Maxamad Ibrahim Mucalimu BBC Somali
Image caption AMISOM
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ciidamadeeda iyo kuwa AMISOM ay qabsadeen magaalada Buulobarde ee gobolka Hiiraan.
Weriyaha BBC-da ee Muqdisho oo la xiriiray mas'uuliyiin dowladda ka tirsan ayaa sheegay in haatan ciidammada ay gudaha u galeen Buulobarde.
Goobjoogayaal ku sugan Buulobarde ayaa goor hore sheegay in dagaal culus oo ka socday meel dibedda ka ah magaalada.
Ciidammo wato hub culus ayaa la sheegayaa inay ka dhaqaaqeen magaalada Beledweyne oo ay gaareen Buulobarde.
Deeganno laga qabsaday Al-Shabaab
9 Maarso 2014
Shabaab oo Rabdhuure laga qabsaday